XOG:- Waa maxay sirta ka dambeysa go’aanka uu soo saaray guddoomiyaha gobolka Banaadir – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Waa maxay sirta ka dambeysa go’aanka uu soo saaray guddoomiyaha gobolka Banaadir
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu wado qorshe lagu mamnuucayo in lacago laga qaado dadka u nasasho tagga beerta Nabadda ee ku taallo magaalada Muqdisho.
Wuxuu guddoomiye Thaabit Cabdi ku dooday in beerta Nabadda ay tahay meel loogu tala galay in bulshadda Soomaaliyeed ay damaashaad u yimaadaan, islamarkaana ganacsatada beerta Nabadda laga doonaayo inay hakiyaan lacagaha halkaasi lagu galo.
Beerta Nabadda ayaa sida la ogsoon yahay waxay dowladda hoose ee Muqdisho ku wareejisay ganacsato reer Muqdisho ah, kuwaas oo maalgashi ku sameeyay.
Heshiis ay kala saxiixdeen dowladda hoose iyo ganacsatada reer Muqdisho ayaa beertaasi noqotay hanti gaar ah oo ganacsi, iyadoo muddo sanado ah ay sidaasi ku shaqeeyneysay.
Waxay beerta Nabadda ka mid tahay hanti fara badan oo Qaranku leeyahay islamarkaana shirkado gaar ah ay dowladihii dalka soo maray ku wareejiyeen ganacsato iyo shaqsiyaad gaar ah.
Ugu dambeyntii, xogta ay heleeyso warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegeysa in guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed uljeedka uu tallaabadan u qaaday ay tahay sidii uu cadaadis ku saari lahaa ganacsatada maal-gashatay beerta Nabadda, islamarkaana uu dhaqaale ku raadinaayo.